DAAWO-Banaanbax ka dhan ah Puntland oo ka dhacay Dhahar & ciidanka oo rasaas ku furay. - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta DAAWO-Banaanbax ka dhan ah Puntland oo ka dhacay Dhahar & ciidanka oo...
DAAWO-Banaanbax ka dhan ah Puntland oo ka dhacay Dhahar & ciidanka oo rasaas ku furay.
Allbanaadir Media (DHAHAR)-Magaalada Dhahar ee xarunta gobolka Haylaan waxaa maanta ka dhacay banaanbax lagu taageerayo madaxweynaha dowladda federalka ah ee Soomaaliya, loogana soo horjeedo siayasadda madaxweynaha Puntland.
Dibad baxaan waxaa hoggaaminayey Cabdijamaal Cismaan Maxamuud oo katirsanaa 8 xildhibaan oo barlamaanka Puntland xasaanaddii ka qaadeen isla markaana dhowaan gaarey magaalada Dhahar oo ay beeshiisu ka soo jeeddo lagana soo doorto.
Ka qaybgalaayasha mudaharaadkaan ayaa waxa ay ku dhawaaqeen ereyo ka dhan ah madaxweynaha Puntland iyagoona sheegay inay taageersan yihiin qorshaha madaxda muddo xileedkoodu dhammaaday ee dowladda Soomaaliya.
Ciidanka ammaanka Puntland ayaa gaarey goobtii uu ka dhacay banaanbaxaasi waxaana ay kala cayriyeen dadkii goobta isugu soo ururay waxaana maamulka degmadu sheegay inaan lagu soo wargelin wax banaanbax ah aysanna aqbali doonin